Wasiirka Beeraha Oo Sharaxay Tirada Beeraha Ku Bur-buray Duufaabtii Sagar | SDWO.COM & SomalilandNews.net
Wasiirka Beeraha Oo Sharaxay Tirada Beeraha Ku Bur-buray Duufaabtii Sagar
Hargeysa (SDWO): Wasiirka wasaaradda horumarinta Beeraha Jamhuuriyadda Somaliland Mudane Axmed Muumin Seed,ayaa ka hadlay tirade beeraha ku baa ba’ay duufaantii Sagar iyo baaxadda qasaaraha ay u geysatay dhulbeereedka gobollada ay ku dhufatay.
Waxaanu sheegay in 1672 beerood ay ku baa ba’een duufaantii dabaylihii iyo roobabkii xoogganaa ee ka da’ay goboladda galbeedka Somaliland kuwaasi oo loogu magac daray dufaanta Sagar,waxaanu sidaa ku sheegay wasiirku waraysi gaar ah oo uu xalay khadka taleefanka ku siiyay Wariye Saciid Cagjar oo ka tirsan wargayska Dawan.
“2730 beerood ayaan soo maray, 1672 beerood ayaa baa ba’ay oo aanay waxba ka oolin 1058 beeroodna waa beeraha ay dhibtu soo gaadhay dadkeena boqolkii shan iyo lixdan waa beeralay waayo qofku keligii ma manaafacaadsado ee beerta markay khudaartu kasoo go’do mid baa halkaa ka soo iibsanaya , midbaa soo raraya , midna suuqa ayuu gaynayaa, midna wuu ka baayac mushtareeya “ayuu yidhi wasiir Axmed Muumin Seed.
Wasiirka Horumarinta Beeraha ayaa sheegay in Wasaarad ahaan ay markii ugu horraysay ka guteen wajibaadkooda saadasha hawada oo ay dadka u sheegeen in roobab dabaylo wataa kusoo wajahan yihiin.
Isagoo arrinta ka hadlaya waxa uu yidhi “Muddo shan cisho ka hor ah ayey Wasaaradda Beeruhu sii sheegtay in ay dalka kusoo fool leeyihiin dabaylo xooggan oo roobab Mahiigan ah wata gaar ahaan xeebaha gobolada Sanaag, Saaxil iyo Awdal waxaanan samaynay wacyi-gelin ku saabsan dabaysha iyo roobabka xoogan , taasi oo u badnaan doonta agagaarka degmada lughaya iyo xeebta gobolka Saaxil.”
Axmed Muumin Seed oo safar dhulka ah kusoo maray goboladda galbeedka Somaliland si uu usoo indha indheeyo xaaladda nololeed ee beeralayda ayaa wargeyska u sheegay “ 18 iyo 19 kii bisha May ayaan Wefti ahaan u baxay gobolada galbeedka gaar ahaan saddexda degmo ee lughaya , Baki iyo degmada Boorama , indhahaygu waxay qabteen dhibaato aad u weyn oo gaadhay dadka beeralayda ah dadkaas oo inta badan beerta noocyada kala duwan ee Khudaarta iyo midhaha waxaa gaadhay dhibaato aad u baaxad weyn oo loo baahan in Shacab iyo xukumadba si midaysan loo wajaho ”.
Wasiirka horumarinta beeraha Somaliland ayaa sheegay in ay wadan dhiig joojinta dadka ku waxyeeloobay masiibadii dufaanta “ Madaxweynaha Somaliland iyo Madaxweyne ku xigeenku waxa ay qaadeen talaabadii ugu horaysay oo dadkii dhintay lagu asaayey , inta noolna dhiig bixin lagu waday si loo gaadhsiiyo wax ay quutan.
Waxaan talaabada ugu mahadcelinayaa waddamada gacanta ka gaystay sida dalka Jabuuti iyo dawladda imaraadka Carabta oo aad inoo caawiyey , dadkii wixii dhintay mooyee intii kale waynu badbaadinay raashin is daba haya oo xidhiidhsanna guri gurina waa loo gaadhsiiyey” ayuu yidhi
Waxaanu intaa ku daray wasiirku isaga oo hadalkiisa sii wata. “guddi ahaan waxa aanu wadnaa sidii dadka aanu noloshooda ugu soo celin lahayn , saddex arrimood ayaa noloshooda samayn ku yeeshay midi waa Xoolaha oo runtii xoolo badan ayaa inaga baxay midna waa beeraha oo beero badan ayaa baaba’ay midna waa dhinaca deegaanka oo geedihii waaweynaa waxa baabisay dabayshii , dhirtii jirtay waxaana muuqada xaaluf ba’an oo deegaanka ka muuqda”.
Wasiir Seed ayaa sheegay in Xukumad ahaan ay wadaan dhiig joojinta dadkii ku waxyeeloobay dhibaatadii dufaanka Sagar “Waxaanu wadnaa dhiig joojin ay nagu hoggaaminayaan madaxweynaha iyo ku xigeenku waxaanay u socotaa si habsami leh oo wanaagsan wixii aanu qaybinay waanu qabanay maalinba raashin wuu yimaada waanan qaybinaynaa wixii yimaada waa la qaybinayaa iyada oo la gaadhsiinayo meel walba iyo guri walba”.